အသက်3နှစ်အရွယ်မှာတွေ့ဆုံခဲ့ကြပြီး ချစ်သူသက်တမ်း 23 နှစ်အကြာမှာ လက်ထပ်ယူခဲ့ကြတဲ့ စုံတွဲ – Shwe News Time
အသက်3နှစ်အရွယ်မှာတွေ့ဆုံခဲ့ကြပြီး ချစ်သူသက်တမ်း 23 နှစ်အကြာမှာ လက်ထပ်ယူခဲ့ကြတဲ့ စုံတွဲ
by Shwe News Time
မြင်မြင်ချင်းအချစ် လို့ခေါ်တဲ့ ချစ်စရာပုံပြင်တစ်ပုဒ်အဖြစ် ခေါ်ဝေါ်တဲ့ ဗီယက်နမ်စုံတွဲနှစ်ဦးရဲ့ အချစ်ဇာတ်လမ်းကို ဝေမျှပြီးတဲ့နောက် များစွာ ပျံ့နှံ့သွားခဲ့ပါတယ် ။ သူတို့စုံတွဲဟာ အသက် ၃ နှစ်ကတည်းကစပြီး ၂၃ နှစ်အကြာ တွဲလာခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီး နောက်ဆုံးမှာ သူတို့တွေ တကယ်လက်ထပ်ခဲ့ရပါတယ် ။ ဒီအကြောင်းက Hung လို့ခေါ်တဲ့ ကောင်လေးဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၃ နှစ်က သူ့ရဲ့ ၃ နှစ်ပြည့်မွေးနေ့မှာ မိဘတွေက သူ့အတွက်မွေးနေ့ပါတီတစ်ခုကို စီစဉ်ပေးပြီး သူ့ဖခင်ရဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကို ဖိတ်ခဲ့ပါတယ် ။ သူငယ်ချင်းရဲ့ဖခင်က သမီးဖြစ်သူ Lily ကို Hung ရဲ့မွေးနေ့ပါတီသို့ ခေါ်လာခဲ့ပါတယ် ။ အဲ့ဒီကနေ သူတို့တွေ ရင်းနှီးကြပြီး Hung က သူကြီးပြင်းလာတဲ့အထိ Lily ကို အမြဲအိပ်မက်မက်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ် ။ ဒါပေမဲ့ Lily က Hung ကို သူမရဲ့အချစ်ကိုဝန်မခံခဲ့ဘဲ Lily က သူ့ကို သူငယ်ချင်းအဖြစ်သာ သဘောထားပြီး သူတို့နှစ်ဦးက လမ်းခွဲလိုက်ကြပါတယ် ။
ဒီလိုနဲ့ Lily က သူမရဲ့ ဇာတိမြို့မှာ အက သင်ယူခဲ့ပြီး လေးနှစ်အကြာမှာ သူတို့နှစ်ဦးက ဂီတဖျော်ဖြေပွဲတစ်ခုမှာ ပြန်လည်ဆုံစည်းခဲ့ကြပါတယ် ။ ဒါပေမဲ့ Hung ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာတော့ Lily ကို အရင်လိုချစ်နေတုန်းပါပဲ ။ ဒါကြောင့် သူက သူမကို ချစ်ကြောင်း ထပ်ပြီးဝန်ခံခဲ့ပါတယ် ။ ဒီတစ်ကြိမ်မှာတော့ Lily က ၄နှစ်တာအတွင်းမှာ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်မတွေ့ဘဲနေကြတာကြောင့် Lily ကသူမလည်း Hung ကို ချစ်ကြောင်း သိစေခဲ့ပါတယ် ။ သူတို့နှစ်ဦးစလုံးက ချစ်သူတွေဖြစ်ဖို့ သဘောတူခဲ့ကြပြီး နောက်ဆုံးမှာ ထိုစုံတွဲက စေ့စပ်ပွဲလုပ်ပြီး ၂၃ ရက်မြောက်တဲ့နေ့ Hung ရဲ့ မွေးနေ့အပြီးမှာ ရိုးရာမင်္ဂလာဆောင်ပွဲကို ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့လိုက်ပါတယ် ။
Reference : sanook
ျမင္ျမင္ခ်င္းအခ်စ္ လို႔ေခၚတဲ့ ခ်စ္စရာပုံျပင္တစ္ပုဒ္အျဖစ္ ေခၚေဝၚတဲ့ ဗီယက္နမ္စုံတြဲႏွစ္ဦးရဲ႕ အခ်စ္ဇာတ္လမ္းကို ေဝမွ်ၿပီးတဲ့ေနာက္ မ်ားစြာ ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားခဲ့ပါတယ္ ။ သူတို႔စုံတြဲဟာ အသက္ ၃ ႏွစ္ကတည္းကစၿပီး ၂၃ ႏွစ္အၾကာ တြဲလာခဲ့ၾကတာျဖစ္ၿပီး ေနာက္ဆုံးမွာ သူတို႔ေတြ တကယ္လက္ထပ္ခဲ့ရပါတယ္ ။ ဒီအေၾကာင္းက Hung လို႔ေခၚတဲ့ ေကာင္ေလးဟာ လြန္ခဲ့တဲ့ ၂၃ ႏွစ္က သူ႔ရဲ႕ ၃ ႏွစ္ျပည့္ေမြးေန႔မွာ မိဘေတြက သူ႔အတြက္ေမြးေန႔ပါတီတစ္ခုကို စီစဥ္ေပးၿပီး သူ႔ဖခင္ရဲ႕ သူငယ္ခ်င္းေတြကို ဖိတ္ခဲ့ပါတယ္ ။ သူငယ္ခ်င္းရဲ႕ဖခင္က သမီးျဖစ္သူ Lily ကို Hung ရဲ႕ေမြးေန႔ပါတီသို႔ ေခၚလာခဲ့ပါတယ္ ။ အဲ့ဒီကေန သူတို႔ေတြ ရင္းႏွီးၾကၿပီး Hung က သူႀကီးျပင္းလာတဲ့အထိ Lily ကို အၿမဲအိပ္မက္မက္ခဲ့တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္ ။ ဒါေပမဲ့ Lily က Hung ကို သူမရဲ႕အခ်စ္ကိုဝန္မခံခဲ့ဘဲ Lily က သူ႔ကို သူငယ္ခ်င္းအျဖစ္သာ သေဘာထားၿပီး သူတို႔ႏွစ္ဦးက လမ္းခြဲလိုက္ၾကပါတယ္ ။
ဒီလိုနဲ႔ Lily က သူမရဲ႕ ဇာတိၿမိဳ႕မွာ အက သင္ယူခဲ့ၿပီး ေလးႏွစ္အၾကာမွာ သူတို႔ႏွစ္ဦးက ဂီတေဖ်ာ္ေျဖပြဲတစ္ခုမွာ ျပန္လည္ဆုံစည္းခဲ့ၾကပါတယ္ ။ ဒါေပမဲ့ Hung ရဲ႕ခႏၶာကိုယ္မွာေတာ့ Lily ကို အရင္လိုခ်စ္ေနတုန္းပါပဲ ။ ဒါေၾကာင့္ သူက သူမကို ခ်စ္ေၾကာင္း ထပ္ၿပီးဝန္ခံခဲ့ပါတယ္ ။ ဒီတစ္ႀကိမ္မွာေတာ့ Lily က ၄ႏွစ္တာအတြင္းမွာ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္မေတြ႕ဘဲေနၾကတာေၾကာင့္ Lily ကသူမလည္း Hung ကို ခ်စ္ေၾကာင္း သိေစခဲ့ပါတယ္ ။ သူတို႔ႏွစ္ဦးစလုံးက ခ်စ္သူေတြျဖစ္ဖို႔ သေဘာတူခဲ့ၾကၿပီး ေနာက္ဆုံးမွာ ထိုစုံတြဲက ေစ့စပ္ပြဲလုပ္ၿပီး ၂၃ ရက္ေျမာက္တဲ့ေန႔ Hung ရဲ႕ ေမြးေန႔အၿပီးမွာ ႐ိုးရာမဂၤလာေဆာင္ပြဲကို က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့လိုက္ပါတယ္ ။
ပထမဆုံးမြေးယောကျ်ားလေးကို မွေးဖွားပေးခဲ့လို့ဆိုပြီး သားဖြစ်သူအား ဒေါ်လာ ၁၄ သန်းကို ရက်ရက်ရောရောလက်ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့ သူဌေးကြီး
အေမျဖစ္သူကို မရလို႔ လက္မေလ်ွာ့ဘဲ ေနာက္ဆံုးသမီးျဖစ္သူနဲ႔ ရေအာင္လက္ထပ္ယူခဲ့တဲ့ အဘိုးအို
NLD ပြန်ကြားရေး တာဝန်ခံ မုံရွာအောင်ရှင် ကွယ်လွန်
ဇနီးဖြစ်သူမှာ ၁၀ နှစ်အတွင်းကို အခြားသော...
အသက် ၈၄ နှစ်အရွယ် အဖိုးအိုတစ်ဦးမှ...
Copyright © 2021. Created by shwenewstime.